Mmeghari nke ọnwa: mkpa na nsonazụ | Netwọk Mgbasa Ozi
Mgbe enyochasịrị mmeghari nke uwa na nsonaazụ ọ nwere maka anyị, anyị ga-enyocha ya mmeghari nke ọnwa. Ọnwa bụ ihe ndị sitere n'okike anyị, ọ na-agbagharị ma na-agbagharị n'onwe ya. Differentdị mmegharị dị iche iche ọ nwere na ịbịaru nso ma ọ bụ ịdị anya nke ọnọdụ ya n'ihe gbasara ụwa anyị na-ekpebi oge nke ụbọchị, ụbọchị, izu, ọnwa na ọbụlagodi afọ na n'ụzọ kachasị emetụta ebili.
Ya mere, n’isiokwu a anyị ga-amụ omimi nke ọma ihe mmegharị ọnwa na ihe nsonazụ ọ nwere maka ndụ n’elu ụwa.
1 Kedu mmegharị ọnwa na-enwe?
2 Ntughari ọnwa na ntụgharị
3 Ihe si na ngagharị nke ọnwa pụta
4 Akwụkwọ ọnwa
Ebe ikike ike ndọda dị n'etiti ọnwa na ụwa, enwere kwa mmegharị eke nke satịlaịtị a. Dị ka ụwa anyị, ọ nwere mmegharị abụọ pụrụ iche a maara dị ka ntụgharị n'okirikiri nke ya na ntụgharị na gburugburu ụwa. Mmeghari ndia bu ndi eji mara onwa ma metuta mmeghari na ọnwa ọnwa.
N'oge mmeghari dị iche iche o nwere, ọ na-ewe obere oge iji mechaa ha. Ọmụmaatụ, usoro ntụgharị zuru ezu na-ewe nkezi nke ụbọchị 27,32. Nke a na-eme, n'ụzọ dị ịtụnanya, ọnwa na-egosi anyị otu ihu ahụ mgbe niile ma yie ka a ga-edozi ya kpamkpam. Nke a bụ n'ihi ọtụtụ ebumnuche geometric na ụdị mmegharị ọzọ a na-akpọ libration libration nke anyị ga-ahụ ma emechaa.
Mgbe ụwa gbara gburugburu Anyanwụ, ọnwa na-emekwa ya, mana n’elu ụwa, n’akụkụ ọwụwa anyanwụ. Ogologo site na ọnwa ruo ụwa na mmegharị ya dịgasị iche iche. Oghere dị n’etiti mbara ala na satịlaịtị bụ 384 km. Ebe dị anya a dịgasị iche dabere na oge ọ nọ na orbit ya. Ebe ọ bụ na orbit na-agbagwoju anya na mgbe ụfọdụ, Sun na-enwe mmetụta dị ukwuu na ike ndọda ya.
Ọnọdụ ọnwa adịghị edozi ma na-agagharị afọ 18,6. Nke a na - eme ka amị n’ọnwa amị na - edozighi ya na perigee nke ọnwa na - apụta maka afọ 8,85 ọ bụla. Nke a perigee bụ mgbe ọnwa na-na-na-adọ ya na nke kasị nso ya orbit. N'aka nke ọzọ, apogee bụ mgbe ọ dị anya site na orbit.
Ntughari ọnwa na ntụgharị
Ejikọtara mmeghari nke satịlaịtị anyị na-agagharị na ntụgharị asụsụ. Ọ na-ewe ụbọchị 27,32, yabụ anyị na-ahụ otu akụkụ nke ọnwa. A maara nke a dịka ọnwa sidereal. N'oge usoro ntụgharị ya Ọ na-etolite otu ntụgharị uche nke ogo 88,3 gbasara ụgbọ elu nke ntụgharị ntụgharị. Nke a bụ n'ihi ike ndọda dị n'etiti ọnwa na ụwa.
N'oge ntụgharị ntụgharị ya na ụwa, ọ nwere ihe ruru ogo 5 n'ihe gbasara elliptical. Ọ na-ewe iji gbanwee otu ihe ahụ n'onwe ya. Ngbanwe a na gburugburu ụwa bụ ihe na - akpụ mmiri dị iche iche anyị nwere ugbu a.
Uzo ozo nke ọnwa na-eme bu nke mgbanwe. Ọ bụ maka ịgbagharị ọnwa n’ọnwa n’elu Anyanwụ. A na-eme mmegharị a na njikọ ụwa anyị, ebe ọ na-agbagharị n'onwe ya ma na-agagharị na gburugburu ụwa.
Ihe si na ngagharị nke ọnwa pụta
N’ihi mmegharị ọnwa ndị a, anyị nwere ụfọdụ ọnwa ndị ị nwere ike ịnụ maka mana ịmachaghị nke ọma. Anyị ga-akọwara gị ha otu otu.
Ọnwa Sidereal. Ọ bụ nke na-ewe ụbọchị iri abụọ na asaa, awa asaa, nkeji iri anọ na atọ na sekọnd iri na otu. Onwa a na aputa ihe mgbe onwa n’emechachara okirikiri. Oge elekere bụ nke kachasị na mbara igwe.
Ọnwa Synodic. Ọ bụ oge ọ na-ewe iji gafee abụọ hà n'ụzọ na-emekarị na-ewe 29 ụbọchị. A na-ejikwa aha nri ehihie.
Ọnwa Tropic. Ọ bụ ihe dịka oge ebe enwere nzọụkwụ abụọ na-esochi ọnwa site na gburugburu nke isi nke Aries. Ọ na-ewekarị ụbọchị iri abụọ na asaa.
Anomalistic ọnwa. Ọ na-ewe ụbọchị iri abụọ na asaa na elekere iri na atọ ma ọ bụ mgbe enwere usoro ụzọ abụọ na perigee.
Ọnwa Draconic. Ọ bụ oge ọ na-ewe site n'otu ụzọ ruo na nke ọzọ nke ọnwa iji gabiga n'ọnụ ọnụ. Ọ na-ewe ụbọchị iri abụọ na asaa na awa ise.
Ọ bụ mmegharị nke ọnwa nwere site na nke anyị nwere ike ịhụ naanị 50% nke elu ya ma ọ bụ otu ihu mgbe niile. E nwekwara ụzọ atọ nke libration. Anyị ga-enyocha ha n'ụzọ miri emi.
Nnwere onwe na ohere. O nwere ihe jikọrọ ya na ọchịchọ dị n'etiti mbugharị nke ọnwa na ụgbọ elu nke elliptical. Nke a na - eme ka ọ kwe omume naanị ịhụ ugwu na ndịda nke ọnwa n'otu oge. Isi okwu nke ụgbọ elu nke ọnwa dị n'elu na n'okpuru ụgbọelu nke orbit. Nke a na-emesi anyị obi ike na e nwere ebe dị elu ị ga-ahụ site na mpaghara pola na-abụghị.
Oge ezumike ụbọchị. N'akụkụ a ọ nwere ọtụtụ ihe jikọrọ ya na ọnọdụ ebe onye na-ekiri ya bụ mgbe ọ na-ese onyinyo nke ọnwa. Enwere ọtụtụ akụkụ geometric iji tụlee.
Libration n'ogologo. Ọ bụ n'ihi n'eziokwu na ntụgharị ntụgharị nke ọnwa zuru oke, ebe usoro ntụgharị abụghị. Nke a na - eme ka akụkụ ahụ bụrụ akụkụ nke ọnwa na - eme ngwa ngwa na apogee jiri nwayọ nwayọ. Ihe yiri ya na-eme na ụwa na oke ya gburugburu anyanwụ mgbe ọ dị na aphelion na perihelion. Dịka nsonaazụ nke ije a, anyị nwere ntụgharị si West, na-eme ka anyị nwee ike ịhụ naanị otu ihu n'akụkụ ọwụwa anyanwụ na ọdịda anyanwụ nke ọnwa.
Enwere ike ịsị na ọhụụ ọnwa bụ isi nke dị n'elu ọnwa ma ọ bụ ebe ụdị libọn nke atọ na-apụta. O doro anya na ọ na-eme ka ọ na-agagharị n'ụdị okirikiri ma ghara ịlaghachi n'ọnọdụ ya.
Enwere m olileanya na ozi a na-enyere gị aka ịmatakwu banyere mmegharị nke ọnwa.
Pathzọ zuru ezu na edemede: Netwọk Mgbasa Ozi » Astron » Mmeghari nke ọnwa